Memphis ilaa iyo Janaayo ayuu haystaa ku bad baadinta waayihiisa Manchester United – Gool FM
Memphis ilaa iyo Janaayo ayuu haystaa ku bad baadinta waayihiisa Manchester United
Kaafi October 10, 2016
(Manchester) 10 Okt 2016. Garabka fashilmay ee Manchester United Memphis Depay ayaa haysta ilaa iyo bisha Janaayo in uu ku bad baadiyo waayihiisa Old Trafford.
22 jirkan ayaa England yimi isaga oo ku faanaya 28 gool oo uu PSV uga soo dhaliyey horyaal Eredivisie, laakiin fiinalihii FA Cup-ka ayaa laga reebay safkii Louis Van Gaal, shaqsi uu mar ku tilmaamay ‘Tababaraha dunida ugu wanaagsan.’
Van Gaal waxaa shaqada United laga eryey 48 saac kaddib kulankii FA Cup-ka, balse Depay waxaa nolol yar ku soo celiyey Jose Mourinho – kaas oo ku adkeystay in uu doonayo la shaqeynta garabka si uu uga caawiyo dib u helidda hab ciyaareedkiisii hore.
Depay waxa uu ciyaaray 95 daqiiqo oo qura halka uu kulan kaliya safka ku soo bilowday – Northampton Town tartanka EFL-ka.
Iyada oo ay United qiimeeneyso hab ciyaareedka Depay xilli walba si ay u xugmyaan kahor inta suuqa dib loo furin Janaayo, Depay laftiisa waxa uu caddeeyey in uusan ku faraxsaneyn xaalada Old Trafford ee haatan.
Shax laga sameeyey 11-kii ugu wanaagsanaa ee suuqii xagaaga xirmay la kala iibsaday
Ancelotti oo Ronaldo ku raacay sida uu dabeecadiisa u sifeeyey